Nezvedu - Nanchang Jingzhao Medical Technology Co., Ltd.
Nanchang Jingzhao Medical Technology Co., Ltd. iri muXiaolan yezvehupfumi uye Tekinoroji Yekuvandudza Nzvimbo, Nanchang Guta, Jiangxi Province. Inonyanya kugadzira zvipfeko zvekuzviparadzanisa, zvipfeko zvekudzivirira, mbatya dzinoshanda uye mabutiro eshangu nezvimwe zvinotsigira zvinodzivirira. Icho chena runyorwa bhizinesi reBazi rezveMabhizimusi eChina.
Pakutanga kwegore, Jingzhao zvekurapa akaunza akati wandei epamberi asina-kuruka machira ekugadzira machira, anosanganisira akajairwa asiri-rakarukwa machira, yakasimba kuramba isina-yakarukwa machira (SMMs), Spunlaced composite isina-yakarukwa machira (SMS), akafukidzwa asiri -yakarukwa machira (PP kana Pe kupfeka). Iyo kambani yakagadza mhando yemhando manejimendi system "yekutanga maererano ne ISO 9001/85" nguva dzese. Uye zvakare, ine nzvimbo yakakura ye100000 nhanho yekuchenesa musangano maererano neGMP chiyero chemidziyo yezvokurapa, yakashongedzerwa neyakakwana yekuyedza uye yekuongorora michina, uye vanopfuura zana nyanzvi mahunyanzvi vakazvipira kuR & D, dhizaini uye kugadzirwa kweasina. -zvakarukwa zvigadzirwa, uye akabatana yenyika kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvigadzirwa zvisiri-zvakarukwa machira kugadzirwa uye yakadzika kugadzira indasitiri.
The kambani adopts yemhando kugadzirwa michina uye experimental zviridzwa kumba uye kunze, zvadzinoita ano muitiro kushanda uye akakwana vasabatwa muitiro uye nzira. Zvese zvigadzirwa zvakapasa iwo emunyika uye epasi rese zviyero senge en iso13938-1: 1999 uye ANSI / AAMI pb70, uye anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo zhinji senge kurapwa, zvipfeko uye hutano hwega.
Isu tiri mugadziri akasimba ane ruzivo rwakapfuma mukugadzirwa uye kugadzirwa kwezvinhu zvisina kurukwa.
● Ruzivo rwakawanda muOEM sevhisi
● Mahara sampuli inowanikwa
● Gamuchira maodha madiki kana masevhisi akagadziridzwa
● Gamuchira L / C, kutumira teregirafu, odha yekubhadhara, nezvimwe
● Ipa FOB, CNF, CIF, EXW, LDB masevhisi
● kukwikwidzana mitengo
● Kugona kwemwedzi kugona kwemamiriyoni mashanu kusvika gumi emadhizaini
● Pakuendesa nguva
● Kugamuchira chechitatu chigadzirwa chigadzirwa, kuongorora chitupa uye zvese zviratidzo zvinokodzera
● Nyanzvi dzekutengesa kunze kwenyika, zvinyorwa, kubvumidzwa kwetsika, kusangana kwekutakura
Isu tinoita bhizinesi reasina-rakarukwa zvigadzirwa zvekudzivirira pasirese, uye takawana zvakanaka kupinza uye kutumira kunze. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, America, Southeast Asia nedzimwe nyika. Iyo kambani ine yakakwana uye yesainzi mhando yekutarisira system. Kubva pakagadzwa, Nanchang Jingzhao Medical Technology Co, Ltd. yakazivikanwa neindasitiri nekuda kwayo kuvimbika, simba uye chigadzirwa mhando. Gamuchirai shamwari kubva kumatunhu ese ekushanyira, kutungamira uye kutaurirana kwebhizinesi.
Kero: Kwete 318, Gong Ye 1Road, Xiaolan Economy Development Zone, Nanchang, Jiangxi, China
Runhare: + 86-791-85761682